नेपाली बजारमा ओप्पोको ए–३१, मूल्य कति? – AayoMail
नेपाली बजारमा ओप्पोको ए–३१, मूल्य कति?
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन २२ गते १७:३७
नयाँ नयाँ भर्सनमा स्मार्टफोन निर्माण गर्दै आएको ओप्पोले नेपालमा ओप्पो ए–३१ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। ओप्पो ए–३१ फ्यान्टसी ह्वाइट (सेतो) र मिस्ट्रि ब्ल्याक (कालो) गरी दुई आकर्षक रंगमा सार्वजनिक गरिएको हो।
७२०/१६०० पिक्सेलसहितको ६.५ ईञ्च वाटरड्रप डिस्प्ले र ८९% स्क्रिन रेसियो सहितको यस फोनले उच्च गुणस्तरिय दृश्यानुभव प्रदान गर्ने बताइएको छ। यसमा स्क्रिनको सुरक्षाका लागि कम्पनीले ओपो ए–३१मा गोरिल्ला ग्लास थ्री राखेको छ।
यसमा रहेको आई प्रोटेक्सन स्क्रिन फिल्टरले हानिकारक ब्ल्यू लाइटबाट प्रयोगकर्ताका आँखालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। ८.३ एएम मोटाइ भएको यो फोन चलाउनका लाथि सहज हुने कम्पनीले विश्वास लिएको छ।
यसको पछाडिपट्टी तीनवटा लेन्स जडान गरिएको छ। कम प्रकाश भएका स्थानमा पनि उत्कृष्ट तस्वीर खिच्नका लागि फोनको प्रमुख क्यामेरामा १२ एमपी सेन्सर र एफ-१.८ एपर्चर राखिएको छ।
सार्वजनिक ओपोको नयाँ ए सिरिजमा १ सय २८ जीबी रोम छ र ४ जीबी र्‌यामसहितको ओक्टाकोर प्रोशेसर उत्कृष्ट स्मार्टफोन कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न २.३ जीएचजेडको गति लिने क्षमता रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
यसको ब्याट्रीको क्षमता ४ हजार २ सय ३० एमएएच छ। नेपाली बजारमा आकर्षक खपत हुने अपेक्षा राखिएको यस फोनको मूल्य २६ हजार ५ सय ९० तोकिएको छ।